FAS waxay ka caawisaa macmiilka inuu iska ilaaliyo qashinka alaabta inta lagu jiro isticmaalka Jawaabta Degdega ah / Kartida Isku-dhafka Khayraadka Xoogan
In ka badan 15 sano waayo-aragnimada warshadaha CNC, waxaan leenahay awood xoog leh ee isdhexgalka khayraadka , kaas oo si buuxda u buuxin kara baahida kala duwan ee macaamiisha.
Sida mashruuca PUMP PART waxaan ku guuleysanay sanadka 2019. Horaantii Jan. Sanadka 2019, waxaan hadda helnay dalabka qaybo ka mid ah loo isticmaalo mashruuca bamka, waxaa jira ku dhawaad ​​labaatan nooc laakiin kaliya 16sets.
Ma fududa in la soo saaro, dhibaatooyinka ayaa ku jira:
1.Quantity waa 16sets kaliya laakiin waxaa jira labaatan naqshadood.
2.Material waa adag tahay in laga iibsado Suuqa Shiinaha.
Tiradu maaha dhibaato sidaas u weyn, waxay u baahan tahay oo kaliya in la hagaajiyo mishiinnada si joogta ah oo kharash badan.
Qaybta ugu adag waa maaddada.
Marka hore, macaamiishu waxay u baahan yihiin walxo H59, mashruuc cusub, waxaan waydiisanay inaan diyaarino hal nooc oo muunad ah kahor wax soo saarka macaamiisha si loo tijaabiyo.
Ka dib markii muunad dhammaatay, waxa loo diray macmiilka oo ay weheliso waraaqo baadhitaan oo taxane ah.
Macmiil ayaa tijaabiyay oo ogaaday in ay fududahay in la jabiyo markii ay isticmaaleen walxaha H59 mashruucooda. Waa wax laga xumaado in muunadku aanu gudbin imtixaanka, laakiin waxa nasiib leh in aanu bixinay FAS.
Qiimaynta ka dib, macaamiishu waxay u beddelaan walxaha C903. Laakiin alaabta noocan oo kale ah kuma badna suuqa Shiinaha waxayna u baahan tahay in la habeeyo, laakiin tirada ayaa aad u yar si loo habeeyo.
Kadib, waxaanu isla markiiba shir la yeelanay maamulahayada wax soo saarka iyo injineerada sare. Isku dhafka kheyraadka aan hayno, oo ugu dambeyntii xalliyo dhibaatada alaabta.
Waxaanu u samaynay falanqaynta alaabta macmiilka ka dib marka alaabta la dhammeeyo. Natiijadu waa sida saxda ah ee macmiilku filayo. Si amarka loo habeeyo si habsami leh.
Macmiil aad ayaa loogu mahad naqayaa dhamaan adeegyada aanu u adeegno,mashruucyo badan ayaa nala dhigay.
Jawaab degdeg ah, Awood is dhexgalka kheyraadka xooggan - taasi waa waxa PRE ay siin karto macaamiisheena!
Waqtiga boostada: Mar-25-2020
Qaybaha Spindle-ka, Qaybaha Saxda ah ee Cnc, Qaybaha Cnc ee Iibka, Alaabta Cnc, Adeegga Cnc ee jaban, Cnc Soo Saaraha Qaybaha leexsaday,